eNasha.com - रहस्य खोल्ने गोली
रहस्य खोल्ने गोली
गएको साता अमेरिकाको फ्लोरिडास्थित एक व्यक्ति बिहान जब न्रिद्राबाट ब्युँझिए, टाउको फुट्लाजस्तो भएर दुख्यो । श्रीमतीलाई उनले अस्पताल लैजान आग्रह गरे । जहाँ डाक्टरहरुले उनको दाहिने कानमा बन्दूकको गोली फेला पर्‍यो ।
"नर्सले विरामीतिर हेर्दै भनिन्, यस्तो लाग्छ कि कसैले तपाइँलाई गोली हान्यो", फोर्ट पियर्स टि्रब्युनले सेन्ट लुसी काउन्टीका अधिकारी केन मस्कारालाई उद्धृत गर्दै भन्यो- "अनि लोग्नेले भन्यो, यो त चान्सै छैन ।"
यता श्रीमती एप्रिल मोलान जब आकस्मिक कक्षमा आइन् र उनले पाइन् कि लोग्नेको कञ्चटभित्र गोली अड्किएछ, तब उनी चकित नै परिन् । किनभने अनुसन्धानबाट पछि खुल्यो कि न्रिद्रामा उनले आफ्नो लोग्नेलाई गोली ठोकिछन् तर न त लोग्नेले यो कुरा चाल पाए न त स्वास्नीले नै । तर न्रिद्रामा ठोकिएको भए पनि अपराध ठानेर प्रहरीले श्रीमती एप्रिललाई जेल चलान गरेको छ । उनलाई खरखजाना अपचलनको आरोप लगाइएको छ । उनलाई अन्य थप के कस्ता मुद्दा चलाउन मिल्छ भनी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
४५ वषर्ीय श्रीमान् माइकल मोलान त्यस बिहान उठ्दा ज्यादै पीडामा थिए र उनले अनुमान गरिरहेका थिए कि उच्च रक्तचापका कारण हुने एन्यूरिजम पो भयो कि ! त्यही भएर उनले श्रीमतीलाई आफूलाई अस्पताल लैजान आग्रह गरेका थिए ।
यता प्रहरीले श्रीमती एप्रिलको कोठामा छानविन गर्दा रगत लत्पतिएको बन्दूक फेला पारेका छन् । अस्पताल भर्ना गरिएका श्रीमान् माइकलको स्थिति अहिले चिन्ताजनक नभएको डाक्टरहरुको भनाइ छ ।
यस्तो पनि ! माया सुन्दरी सेलेब्रिटी मूर्ख्याइँ भव्यता मुद्दा मामिला इन्टरनेट गुगल बलिउड विज्ञापन श्रीमानश्रीमती उपाय फट्याइँ कीर्तिमान नग्नता परिस्थिति प्रविधि उदेकलाग्दो उदारता